DHAGAYSO:Gaalkacyo oo war aan la filayn kasoo dhacay & Gurmadkii Baladweyne ee Puntland oo jidka loo galay
November 16, 2019 Mahad Jama 3
GAROWE(P-TIMES)- Wararkii ka imaanaya maagalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in gudaha magaaladaasi ku xaniban yihiin gaadiid xamuul ah oo gaadhaya 21 gaadhi, kuwaas oo ka baxay deegaanada Puntland kuna sii jeeday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Gaadiidkani xamuulka ah ayaa ku xaniban magaalada Gaalkacyo dhanka maamulka Galmudug muddo saddex cisho ah, waxaana is hortaag ku sameeyey ciidamo malayshiyaad ah oo kasoo jeeda Koonfurta magaalada Gaalkacyo.
Gaadiidka oo ay saaran yihiin deeq kala duwan oo shacabka Puntland ay ugu talagaleen in ay ku taakuleeyaan dadka ku dhibaataysan magaalada Baladweyn oo fatahaado xoogan ay ka dhaceen ayaa la sheegay in malayshiyaadka haysta ay ku xujeeyeen lacago baad ah, taas ay walaac ka muujiyeen wadayaasha gaadiidkaasi.
Yalax Muuse Axmed oo kamid ah darawalada wada gaadiidka ku xanibay Koonfurta magaalada Gaalkacyo oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in jid gooyo ay kala kulmeen ciidamo malayshiyaad beeleed ah oo kasoo jeeda Koonfurta magaaalada Gaalkacyo isla markaasna aysan weli la kulmin cid ka tirsan maamulka Galmudug.
Waxa uu sheegay in ay xidhiidho kala duwan la sameeyeen culimada iyo madaxda Puntland ee deeqdani gaadiidkooda loo saaray si looga sii daayo aaga Badhaxley oo ay ku xaniban yihiin, waxaana uu Yalax shaaca ka qaaday in aysan jirin weli cid u tagay gaadiidkani siday deeqdan raashinka ah si looga sii daayo raga haysta.
Arbacadii lasoo dhaafay ayey ahayd markii madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Denni uu kaga qayb galay maagalada Garowe xaflada amba bixinta gurmadka Puntland ay u dirtay dad weynaha magaaladda Baladweyne oo dhowaan ay waxyeelo kasoo gaadhay fatahaaddii webiga Shabelle, waxaana gurmadkaasi oo ka koobnaa 20 gaadhi oo nooca xamuulka qaada ah oo ay saaran yihiin 12,733 Kiish oo raashin ah iyo dhar cusub loogu talagalay in la gaadhsiiyo 7000 oo qoys oo kamid ah walaalaha ay saameeyeen fatahaadaha ku dhuftay Baladweyne.
Gadidka macawacawimada wada ee laga kenaya dhanka puntaland oo lagu horjogsaday dhanka baraxley ee isla galkacyo,wa in lagu soceliya magaalada garoowe,rashinkan lagu takuliyo dadka danyarata ah ee ku nool magaloyinka puntland.
Mooryaan waligood Risqi xaaram ah bay raadiyaan.Waxay nacfi ka doonayaan gargaarka loo soo uruuriyey samaakiinta reer Hiiraan.Sun iyo shamiito cuna.Intaas waxay raadinayaan risqi xaaraam ah.
Hadii farmaajo uu galmudug ku qabsaday 200 oo askari oo Shabaab 30don-meeyo maxaysato galmudud barkiis ku haysato—– maxaa u diiday puntland in ay 1000 askari ku sagootiso deeqda ilaa baladweyne.
War bal sug—- taasu maskaxgal ma noqonayso waayo kan gaajada la rafaadaya iyo kan ka hor istaagsan waa isku hayb, oo kii aad badbaadinaysay ayaa xaad kugu rudin isagoo ka xun jiirida aad soo jiirtay bah-wadaagiisa. Raashinka haloo qaybiyo danyarta puntland.